ကမ်းပါးမြေ ပြိုကျမှုကြောင့် နေအိမ်တစ်လုံးမှ မီးဖိုချောင် ပျက်စီးပြီး အနီးရှိ နေအိမ်အချို့?? - Yangon Media Group
ကမ်းပါးမြေ ပြိုကျမှုကြောင့် နေအိမ်တစ်လုံးမှ မီးဖိုချောင် ပျက်စီးပြီး အနီးရှိ နေအိမ်အချို့??
ပုလော၊ ဇူလိုင် ၅
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ပုလောမြို့နယ် ရှပ်ပုံကျေးရွာ၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှု ကြောင့် ကမ်းပါးမြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွား၍ အနီးရှိနေအိမ်တစ်လုံး၏ နောက် ဖေးမီးဖိုချောင်ပေါ်သို့ ပိမိခဲ့သဖြင့် မီးဖိုချောင် ပျက်စီးသွားပြီး အနီးနားရှိ နေအိမ်များအား အတားအဆီးနှင့် အကာအကွယ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၅ ရက် နံ နက် ၁ နာရီခွဲခန့်က မိုးအဆက်မ ပြတ် သည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ပုလောမြို့နယ် ရှပ်ပုံကျေးရွာ၊ ဝါးတန်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက် ကမ်းပါးမှ မြေပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဝါးတန်းလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဦးသာ အေး၏နေအိမ် အနောက်ဘက်မီး ဖိုချောင်ပေါ်သို့ ပိသွားခဲ့သည့်အတွက် အလျား ပေ ၃ဝ၊ အနံ ၁၈ ပေရှိ ဓနိမိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း ထမင်းစား မီးဖိုချောင် ပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကမ်းပါးပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ပုလောမြို့နယ် မီးသတ်စခန်းမှ စခန်းတာဝန်ခံ ဒုမီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်ဇင်ထိုက် ဦးစီးပြီး သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာ အရန်မီးသတ်တပ် ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများမှ ဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်း ဖယ်ရှားမှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် ထမင်းစားမီးဖိုချောင်တစ်လုံး၏ ပြိုကျပျက်စီးမှု ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေ ကျပ် ၄ဝ၅ဝဝဝ ခန့်ဖြစ်ပြီး နေအိမ်ပိုင်ရှင် မိသားစုအား ယာယီနေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပြီး ၎င်း၏ ဘေးဘယ်ညာ နေအိမ်ငါးလုံးလည်း ဆက်လက်နေထိုင်ရန် မသင့်တော်သော ကြောင့် ယာယီနေထိုင်ရန် အတားအဆီးနှင့် အကာအကွယ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ - အိန္ဒိယနယ်စပ် ကလေး၊ တမူးဒေသသို့ ကွမ်းရွက် အဝင်များသော်လည်း အိန္ဒိယဘက်မှ ဝယ်ယူမှု နည်း??
(၇၁)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ပုံတူကို လူငယ် ဂရပ်
ဒါရိုက်တာမိုက်တီးကို စိတ်ကြွဆေးပြား ရောင်းချခဲ့သူ ထွက်ပြေးနေသဖြင့် လာမည့် ရုံးချိန်းတွင်
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဖြေရှင်းချက် အပေါ် ကြိုဆိုသော်လည်း နောင်တွင် တိကျပြတ်သားစွာ ထုတ်ပြန်ရန်